အဝါရောင်ပန်းခြုံ Jumpsuit - Buddhatrends
$75.65 $89.00 သငျသညျ (15% Save$13.35)
တစ်ခုမှာအရွယ်အစား / အဝါရောင်
တစ်ခုဆန်းထုံးစံ၌ဤရောင်စုံခြုံငုံစီမံကိန်းများကိုကြော့နှင့်နှစ်သိမ့်။ ၎င်း၏ပန်းပုံစံများအလွန် flamboyant နှင့်မျက်စိ-ဖမ်းတစ်ပြောင်ပြောင်တောက်သောအသွင်အပြင်ကြောင့်ဝတ်အကြင်သူသည်ပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါအရောင်များနေဆဲမှန်ကန်စွာဝတ်ဆင်တဲ့အခါမှာတစ်ဦးယုံကြည်မှုအလားအလာဆောင်ခဲ့ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ဖြစ်ခြင်းနေစဉ်မျက်စိပေါ်မှာလွယ်ကူသည်တစ်လမ်းအတွက်ပေါင်းစပ်အဝါရောင်အစိမ်းရောင်နှင့်မီးခိုးရောင် pastel ။
The overall can be paired with white tees and sneakers to giveastunning appearance and the addition ofavintage neck piece will do well to kill off the look. Perfect outfit for the summer weather as it combines the coolness of cotton which is most conducive for heat, and bright colors; which are characteristic of summer clothing inaway that is flawless for the everyday woman. This overall isamasterpiece that assures panache, comfort, and sophistication inaway that cannot be faulted.
အရှည် 110cm (သိုင်းကြိုးမပါဝင်), 104cm တွေဆီကနေ, တင်ပါးဆုံရိုး 120cm, ပေါင် 74cm, Cuff 48cm
3 /4ရှည် Printed Palazzo ဘောင်းဘီ
3 /4ရှည် Printed Palazzo ဘောင်းဘီ $57.80 $68.00
ငှက်နှင့်ပန်းပွင့်စပျစ်သီးမီဒီ Dress $60.35 $71.00
Boho Gypsy ပိတ်ချော Maxi Dress
Boho Gypsy ပိတ်ချော Maxi Dress $160.65 $189.00
Boho V ကိုလည်ပင်း Sleeveless သဲသောင်ပြင် Dress
Boho V ကိုလည်ပင်း Sleeveless သဲသောင်ပြင် Dress $32.40 $54.00
ကာတွန်းကြောင်ချောင်ပေါ့ပေါ့ပါးပါးတီရှပ် $36.60 $61.00
ပေါ့ပေါ့ပါးပါးလဲမှို့ပိတ်ချောချောင် V-လည်ပင်းအင်္ကျီ Dress
ပေါ့ပေါ့ပါးပါးလဲမှို့ပိတ်ချောချောင် V-လည်ပင်းအင်္ကျီ Dress $54.40 $68.00
ပေါ့ပေါ့ပါးပါးလဲမှို့ပိတ်ချောယေဘုယျ Dress $65.45 $77.00